ဂဟေ Desoldering ဘူတာ
ဂဟေ Rework ဘူတာ
SMD Rework ဘူတာ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေ Rework ဘူတာ -> ဘူတာ Rework
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူကို၏အပေါများအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ ဘူတာ Rework စက်ရုံမှာ Taiwanကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖောက်သည်ကျနော်တို့ရိုးရိုးသားသားအသစ်တစ်ခုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ပိုပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရန်ကတိထားရာအချိန် frame ကိုအတွင်းပြီးစီးခဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်ဈေးနှုန်းများမှာရရှိနိုင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များပိုများသောမော်ဒယ်များ, ကျေးဇူးပြု. ချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ကြမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်မှာပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု
ကအရည်အသွေး, ကြာရှည်ခံမှု & finish ၏ဝေါဟာရများအတွက်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
multi-function ကို SMD Rework ဘူတာ
1. LF-853D မြင့်မား powered ဂဟေကိုသံနှင့်အတူ reflow system ကိုကျင်းပနေတဲ့လက်ကိုပေါင်းစပ်သည်။
2. ၎င်း၏ sirocco စတိုင်ပန်ကာမီးဖိုစနစ်များ reflow ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ convection စတိုင်အပူပေးအပူဒြပ်စင် thru ချောမွေ့စွာ Airflow တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် non-ဖိအားလေကြောင်းရန်စမ်းချောင်းထိုကဲ့သို့သော BGA နှင့် SMD ကိရိယာများအဖြစ်အလွန်အမင်းထိခိုက်မခံတဲ့ IC packages တွေ reworking သည်စုံလင်သော။
3. An အဘက်ဘက်မှဖွံ့ဖြိုးပြီးလက်အပိုင်းအစကြီးစွာကိုင်တွယ်နှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူပါသည်။ အဆိုပါပေါင်းစည်းလက်အပိုင်းအစပိုင်ရှင်တစ်ဦး သီချင်းဆို. package ကိုအတွက်အများဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကိုရက်ရက်ရောရော desktop ကိုအာကာသအထိရှင်းလင်းရေး။
4. ဂဟေကိုသံ fastly တက်အပူအရာနှင့်ကြီးစွာသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနိုင်ပါတယ်။ ခဲအခမဲ့ application များအတွက်သင့်လျော်သော။
5 LF-853D စထိုကဲ့သို့သောပျင်းရိ mode ကိုအော်တိုပိတ်နှင့် overheat ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်လုံလောက်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှု features တွေကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ ပျင်းရိ mode ကိုအော်တိုပိတ်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး overheat ။ ပျင်းရိ mode ကိုအော်တိုပူလေကြောင်းသေနတ်ထို့ကြောင့်အပူချိန်ချလုံခြုံအဆင့်အထိသွားပြီပြီးနောက်အပူကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုပိတ်ပစ်ရန် system ကိုသွန်းလောင်းပေး၎င်း၏ပိုင်ရှင်အပေါ်ထားရှိခဲ့လျှင် feature ကိုကို detect ကိုပိတ်ထားပါတယ်။
6. ရိုးရှင်းတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအပြည့်အဝစက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်လွယ်ကူ, operate မှ။
7. နောက်ဆုံးမှာတော့တစ်ဦးခေတ်မီ package ကိုအတွက်ထူးခြားသော, ဆန်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကို dual function ကို system ကိုတိကျ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိသမျှနှင့် reworking လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီဖို့အသုံးပြုမှုလွယ်ကူပါသည်။
ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ SOIC, chip, QFP, PLCC, BGA အဖြစ်, SMD အများစုသည်သင့်လျော်သည်
သင်ဤ rework ဘူတာရုံမိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
BGA Rework ဘူတာ
BGA Rework ရေးစခန်းများ
Hot Air လေကြောင်းလိုင်းဘူတာ